अनुसन्धानको एक सानो बिट नाटकीय रूपमा सामाजिक साझेदारी र ड्राइभ बिक्री असर गर्न सक्दछ Martech Zone
अनुसन्धानको एक सानो बिट नाटकीय रूपमा सामाजिक साझेदारी र ड्राइभ बिक्रीमा प्रभाव पार्न सक्दछ
मंगलवार, सेप्टेम्बर 4, 2018 मंगलवार, सेप्टेम्बर 4, 2018 Douglas Karr
जबकि धेरै साना व्यवसायहरू छन् फेसबुक छोड्दै, जब म ग्राहकको लागि त्यहाँ केहि अप्रत्याशित भएको देख्छु म सँधै षड्यन्त्र गर्दछु। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, जब सम्म उनीहरू पोष्ट पदोन्नति गर्न को लागी भुक्तान गरिरहेका छैनन्… म अपेक्षाहरू धेरै माथि सेट गर्दिन। मेरो ग्राहकहरु मध्ये एक पारिवारिक चलित होम सेवा कम्पनी हो जुन इण्डियाना राज्य भरि सेवा गर्दछ। तिनीहरू यहाँ 47 वर्ष को लागी गरीएको छ र अविश्वसनीय प्रतिष्ठा छ।
भर्खरै, एउटा असिना तूफानले सहरको छेउछाउको इण्डियानापोलिस भनिने शहरमा आक्रमण गर्यो ग्रीन्सबर्ग आमोस एक्सटेरियर्स दशकौंदेखि ग्रीन्सबर्गमा व्यापार गर्दै छ र मार्केटि and र सेल्स टोली पूर्ण रूपमा सेवा ग्राहकहरु लाई लाग्यो साथ साथै छिमेकीहरुलाई सन्देश पठाउनको लागि जो आफ्नो घरको छत वा साईडिंगमा बिग्रिएको छ। टोलीले मलाई यात्राको बारेमा बतायो र मेरो तस्बिरहरूको गुच्छा पठाइयो। म कहिल्यै ग्रिनसबर्गमा गएको छैन त्यसैले म यो निश्चित हुन चाहन्थें कि त्यहाँका मानिसहरूसंग राम्रो सम्बन्ध राख्न हामीले केही स्थानीय जानकारीको साथ शहरको कुनै पनि कुरा छिडक्यौं।
जब मैले ग्रीन्सबर्गलाई हेरेँ, तब म मोहित भएँ जब मैले यसलाई "रूख शहर" को रूपमा वर्णन गरेको देखें। प्रश्नमा रूखहरू नजिकको जn't्गल थिएन, यो वास्तवमा १ trees1870० को दशकदेखि डेकाटुर काउन्टी कोर्टहाउस टावरको माथिल्लो भागमा बढेको रूखहरू हो! अलि बढी खन्न, र मैले एउटा लेख पढें कि रूखहरू वास्तवमा एक समयमा हटाइएका थिए र अझै पछाडि बढेका छन्। मैले जाानासँग उनीहरूको मार्केटिंग निर्देशक भ्रमणको साथ छोटो ब्ल्ग पोष्ट क्राफ्टिंगमा काम गरें ... र यसले उडायो!
मैले उनीहरूको प्रकाशनलाई वर्डप्रेसमा होस्ट गरेको छु र उनीहरूको सामाजिक मिडिया फिडहरू प्रकाशित गर्न एकीकृत गरेको छ। त्यसोभए recap गरौं ... एक फेसबुक पेज मा एक प्रकाशित पोस्ट। सबै विज्ञहरूले तपाइँलाई भन्नेछन् कि त्यहाँ त्यस्तो कुनै पोष्ट छैन कि त्यस्तै पोष्ट कुनै प्रकारको ट्र्याक्सन फेसबुकमा प्राप्त हुन्छ, हैन? गलत!
पत्ता लगाउन आउनुहोस्, त्यहाँ रूखहरूसँग के गर्ने केही विवाद छ। धेरै मूल निवासीहरू रूखहरू l भएको विश्वास गर्छन्एज दाँत एफेन्स, एउटा दावी जुन स्मिथसोनियन संस्थाले समर्थन गरेको हो। यद्यपि पर्डु युनिवर्सिटी फोरस्टरहरूले हालसालै गरेको अध्ययनले देखाएको छ कि वर्तमान रूख एक हो चकलेट। रूखमा एक बहस फेसबुक पोस्ट मा शुरू भयो, 50० भन्दा बढी व्यक्ति संलग्न!
सबै टिप्पणीहरू राम्रो थिएनन् - केहि ट्रोलले कुराकानीमा पनि हान्यो। यद्यपि, प्रायः नकारात्मक टिप्पणीहरू विश्वासी आमोस एक्सटेरियर्स ग्राहकहरूले प्रतिरोध गरेका थिए - जसले कम्पनीलाई अझ राम्रो देखीरहेको छ! जब पोष्ट बन्द भयो, बिक्री बालुवा मार्केटिंग VP क्रिस शिटहरु अवसर देखे र तुरुन्त पोस्ट लाई बढावा दिए। उसको बढुवाको परिणामस्वरूप २,2,500०० व्यक्ति थप ,,,०० ग्रीन्सबर्गका नागरिकहरूमा पुग्न विस्तार भयो, जसमध्ये १ 5,800 जना अधिक जानकारीको लागि साइटमा फिर्ता क्लिक गर्दै थिए।
सबै भन्दा राम्रो, Amos Exteriors एक मुट्ठी बढी छत निरीक्षण तालिका गर्न सक्षम थियो।
रिसर्च ड्राइभको नतीजा
हामी प्रत्येक ग्राहकको साइटमा प्रकाशित प्रत्येक लेख अनुसन्धान गर्छौं। अनुसन्धानले हाम्रो ग्राहकको सामग्री मार्केटिंग, खोज मार्केटि।, र सामाजिक मिडिया मार्केटिंगमा प्रभाव पारेको छ। अवश्य पनि, मैले केहि भौगोलिक स्थलहरू, जिप कोड, र केही सांस्कृतिक कार्यहरू परिभाषित गरेर यस पोष्टको साथ केही स्थानीय खोजी ध्यान ड्राइभ गर्न चाहान्थें। यद्यपि यस शहरको अनुसन्धान गर्दा मैले साझेदारी गर्न पनि एउटा कूल सानो कथा भेट्टाँ। आमोस एक्स्टेरियर्सबाट हाँसोरहेको टोलीको साथ फोटो थप्नुहोस् र यो उत्तम संयोजन हो - सबैलाई सँगै लिएर फेसबुकमा पत्ता लगाउनको लागि।
अझै फेसबुक छोड्नुहोस् ... अनौंठो सामग्री मा एक सानो कडा परिश्रम गर्नुहोस् र तपाईं आफ्नो परिणामहरू देख्नुहुनेछ!
टैग: सामग्री मार्केटिङफेसबुक पोस्टस्थानीय एसईओअनुसन्धानखोज इञ्जिन मार्केटिंगसामाजिक मिडिया मार्केटिङ
SEO र SEM बीच भिन्नता, तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक क्याप्चर गर्न दुई प्रविधिहरू
मलाई लाग्दैन कि मार्केटिंग भनेको पैसा कमाउने हो